यस्तो छ काठमाडौंको यौनबजार | EuropeNepal.Net
Europe Nepal Saturday, May 24, 2014
बुधबार साँझको ठीक ७:४५ बजेको छ। खुला मञ्चको दक्षिणपश्‍चिम गेटदेखि भोटाहिटीतिर जाने सब वेसम्मको फुटपाथमा मेला लागेजस्तै मानिसको भीड छ। यो प...
Wednesday at 7:45 o'clock in the evening is fine. Open Forum's southwest gate to bhotahititira fair to all the drunk man vesammako crowd the sidewalks. With best among the people of different patterns niyalirahecha terrestrial. Are grouped among the various.
तीमध्ये एक झुन्डमा तीनजना पुरुष र एक महिला छिन्। सेता बुट्टेदार कुर्ता सलवारमा सजिएकी ती गोरो वर्णकी महिला हदै भए २० वर्षकी होलिन्। महिला भन्दै थिइन्, 'पन्ध्र सयबिना मरे जान्‍नँ।'
पुरुष भन्दै थिए, 'पाँचमा कुरा मिलाऊ न।'
पंक्तिकारको आँखा पुग्यो, अर्को दृश्यमा। दृश्य अलि अनौठो थियो। सुनौलो रङको कुर्ता सलवार लगाएर रेलिङमा ढेसिएर बसेकी एक वृद्धा ग्राहकसँग कुरा मिलाउँदै थिइन्। वृद्धा आमासमान थिइन् भने ग्राहक युवा छोरासमान। '६० कटेकी पनि ग्राहक खोज्न आइछन्', पंक्तिकारले मनमनै सोच्यो। वास्तविकता बुझ्न ती दुई छेउ पुग्दा थाहा भयो, ती वृद्धा ग्राहक खोज्नै आएकी रहिछन् तर आफ्नो लागि होइन। ती युवा ग्राहकलाई फकाउने भावमा वृद्धा भन्दै थिइन्, 'भाइले खोजेजस्तै छन्, राम्रीराम्री छन्।' थाहा भयो, कमिसनका लागि सडकमा लाग्ने यौनबजारमा वृद्धाहरू पनि आउँदा रहेछन्।
Panktikarako eye reached , the next view . View wasabit strange . Golden Happiness wearing salwar dhesiera sailing on one thing shaking her old customs . Old amasamana she said client Young chorasamana . Belated '60s, Marilyn also seek customers ' , panktikarale thought glamorous . They know what happened when the two side to understand the reality , the old passport, but its not for the client foremost . These young consumers, to convince her confederates old saying , ' brother are eager , ramriramri are . ' Know what happened , the trust for the streets Duration thirties women be impressive.
पंक्तिकारले काठमाडौंका सडकमा प्रशस्तै यौनकर्मी छन् भन्ने सुनेको मात्रै थियो। सुनेपछि उनीहरूलाई हेर्ने इच्छा तीव्र हुँदै गइरहेको थियो। एक दिन सँगै डेरा बस्ने साथी हस्याङफस्याङ गर्दै कोठामा आइपुग्यो। उसले सुनाएको विवरण यस्तो थियो, 'म आउँदै थिएँ। पानी पर्‍यो। पानी परेपछि ओत लाग्न एउटा होटलभित्र छिरेँ। भित्र छिरेको, त्यहाँ त यौनकर्मीको बजारजस्तै पो रहेछ। मलाई साह्रै कर गरे। न म आफू उनीहरूसँग जान चाहने, न पैसा छ। तर, काठमाडौंमा दिउँसै यस्तो हुन्छ भन्नेचाहिँ थाहा भयो।'
तर, प्रत्यक्ष रूपमा पहिलो पटक यौनकर्मी महिलासँग भएको साक्षात्कार अलि रोमाञ्चक छ। नक्कली एडिडास जुत्ताले खुट्टा साह्रै दुखिरहेको थियो। वीर अस्पतालको आकासे पुलमा जुत्ता फुकालेर दुखेको दाहिने खुट्टाको कुर्कुच्चा सुम्सुम्याउँदै गर्दा पुलतिर उक्लँदै गरेकी एक महिलाले भनिन्, 'हेल्लो !'
पुलुक्क हेर्दा ती महिलाले भनिन्, 'जाने हो?'
बुझिहालियो, ती महिला यौनकर्मी हुन्। सुरुमा त खुट्टाको दु:खाइका कारण अलि झर्किएर जवाफ दिइएछ, 'जान्नँ, नजाने।'
एकछिनपछि समालिएर सोधियो, 'कति हो?'
'पाँच सय', उनले भनिन्।
एक दिन त्यहाँ एउटा घटना भयो। एकजना सानीसानी लाग्ने यौनकर्मी रिसाउँदै, कसैलाई सराप्दै र आवश्यक परे कारबाही गर्ने भन्दै आइपुगिन्। भन्दै थिइन्, 'मैले चिनेको एउटा सई छ, उसलाई भनेर पक्राइदिन्छु सालालाई।'
'के भयो?', उनकी साथीले सोधिन्।
'म नांगै थिएँ, मेरो छातीको फोटो पो मोबाइलबाट खिच्न खोज्दो रहेछ', उनले आफ्नी साथीलाई भनिन्, आक्रोशित भावमा।
कान थापेर सुन्दा के पत्ता लाग्यो भने ती महिलाले एक भारतीय ग्राहक फेला पारिछन्। एक हजार भारुमा कुरा मिलेछ। दुवैबीच यौनसम्बन्ध भएछ। त्यसपछि ती ग्राहकले आफ्नो मोबाइलबाट नग्न अवस्थामा ती महिलाको फोटो खिच्न खोजेछ। महिलालाई रिस उठेछ। झोकिएर भन्दै थिइन्, 'ल फोटो त खिच्ने रे, नांगो छाती भएको फोटो खिच्न म किन दिने? सालाले एक पोज खिच्न भ्याइहाल्यो।'
त्यही रेस्टुराँमा ग्राहक खोज्दै आएकी एक महिलालाई देखेँ, कतै देखेको वा चिनेजस्तो। देब्रे पाखुरामा बिच्छीको ट्याटु खोपेकी रहिछन्, त्यहीमात्रै परिवर्तन देखेँ, अरू जम्मै उस्तै। उनलाई सोधेँ, 'तिम्रो घर धरान हो?'
उनले भनिन्, 'हो।'
'तिमी ... दाइको घरमा बसेकी थियौ हो?'
फेरि जवाफ आयो, 'हो।'
काठमाडौंको यौनबजारमा सोह्र शृंगारमा आउँछन् ग्राहक खोजी गर्ने तेस्रो लिंगीहरू। पहिले उनीहरूको केन्द्र थियो, ठमेल। अहिले रत्नपार्क केन्द्रित भएका छन्। एक साँझ सहकर्मी मित्र बालकुमार नेपालसँग रमिता हेर्न ठमेल पुगियो। त्यहाँ एउटा अनौठो दृश्य देखियो। तेस्रो लिंगीहरू भागिरहेका थिए, एकजना व्यक्तिचाहिँ हेल्मेट लिएर उनीहरूलाई खेदिरहेका। अचम्म परियो। ती व्यक्ति तेस्रो लिंगीप्रति आक्रोश पोखिरहेका थिए। भन्दैथिए, 'झुक्याउने?'
कुरा के परेछ भने ती व्यक्ति महिला यौनकर्मी ठानेर तेस्रो लिंगीको पछि लागेछन्। यौनसम्पर्क गर्ने बेलामा फरक लिंग फेला पर्‍यो। त्यसपछि आक्रोशित भएका रहेछन्।
-अन्न पूर्ण पोस्ट
EuropeNepal.Net: यस्तो छ काठमाडौंको यौनबजार